Ndifanele ndibeke phi ukulahleka kwam? | Ibhlog yeNtengiso ye Forex - Iindaba ze Forex, amaNqaku kunye noHlolo lweNtengiso- iFXCC
Amanqaku orhwebo nge Forex
Ngaba iTrendle isenguMhlobo wakho
Ndifanele ndibeke phi ukulahleka kwam?
Ngomhla wesihlanu • Phakathi kwemigca • 10300 izimvo • Comments Off Ndifanele ndibeke phi ukulahleka kwam?
Izizathu zokuba urhwebo ngalunye kufuneka luthathwe nelahleko lokumisa sisifundo ebesikhe sakugquma kwezi kholamu ngaphambili. Kodwa ngamanye amaxesha, ngakumbi abafundi bethu abatsha, kufanelekile ukuzikhumbuza ukuba kutheni kufanelekile ukuba sisebenzise ukuyeka kurhwebo ngalunye.
Kulula ukuba samkele uluvo lokuba ishishini lethu yinto engakhuselekanga, engenasiqinisekiso sokunikwa konke konke, emva koko kufuneka siyilwe imeko engakhuselekanga (engenaziqinisekiso) ngokuzikhusela ngalo lonke ixesha. Ukuyeka ukunikezela ngokhuseleko kunye nesiqinisekiso njengoko sisazi ukuba singalahla kuphela 'x' isixa seakhawunti yethu ngentengiso nganye ukuba sisebenzisa isitopu. Ukulawula umngcipheko kunye nokulawulwa kwemali ngumba ophambili wokusinda kunye nempumelelo kolu shishino kwaye le nto yolawulo inokusetyenziswa kuphela ngokusebenzisa iindawo zokumisa.
Impikiswano xa kuthelekiswa nokusebenzisa izinto zokumisa ayithethi ngokungathandabuzekiyo, eyona nto ihlekisayo yeyokuma kovavanyo ukusukela oko urhwebo olusekwe kwiwebhu luye lwahamba ngokubanzi malunga neminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo. "Ukuba usebenzisa indawo yokumisa umrhwebi wakho uyazi ukuba i-stop order sakho siphi kwaye uza kuyeka ukuzingela." Indlela olu hlanga olungenangqondo olukhule ngayo lwaba yintsomi yokurhweba iyimfihlakalo kubarhwebi abaninzi abaphumeleleyo nabanamava, kodwa kufanelekile ukubalwa.
Ukuzingelwa kweemarike kuyeke ngengozi ngokuchaseneyo noyilo, nokuba ingumrhwebi wakho, okanye iibhanki iiodolo zihanjiswa nge-ECN okanye imodeli yeshishini le-STP, ukuzingela kuyayeka. Thatha oku njengomzekelo; okwangoku ixabiso elicatshulwe kwi-EUR / USD lisondele kakhulu kwi-13800, ayithathi ingcinga eninzi yokuqonda ukuba uninzi lweeodolo zenqanaba leziko ziya kudityaniswa kule nombolo ibaluleke kakhulu yengqondo.
Nokuba uthenge, uthengise okanye uthathe ii-odolo zomda wenzuzo eli nqanaba ngokungathandabuzekiyo libaluleke kakhulu. Ke ngoko ukuba besiza kuthatha urhwebo kwaye sisebenzise eli nani liphambili njengokuma kwethu kufanelekile ukuthi singamema inkathazo ngokungangoko kunokwenzeka kwawo nawuphi na umyalelo obangelwe kweli nqanaba kunokwenzeka kakhulu. Ngokuzenzekelayo i-13800 inokuba ingqineke iyinqanaba eyoyikekayo lokubeka urhwebo olufutshane ukuba sikholelwa ukuba ukuthanda icala bekukubi, kodwa ukubeka indawo kweli nqanaba kunokuba yingxaki.
Ke ukushenxisa ecaleni ukuthandabuza kwethu kunye nokhathalelo lokungabeki iindawo zokuma kufutshane namanani asondelayo okanye ajikelezayo apho kufaneleke khona ukuba sibeke iindawo zethu zokumisa, ukuba sijonga amanani kunye namanqanaba okanye sijonge amacebo kwelona nyathelo lentengo lisandula ukwenzeka, okanye kufuneka sisebenzise zombini ezi zinto ukuze ukhethe apho sibeka khona iindawo zethu zokumisa? Ngaphandle kwamathandabuzo kufuneka sisebenzise indibaniselwano yokuqikelela kunye nobungqina obusekwe kwisenzo sexabiso samva nje.
Ukuphakama kwamva nje, ukuhla kwamvanje kunye namanani ajikelezayo
Apho sibeka khona iindawo zokumisa zethu zihlala zixhomekeke kubude bexesha esithengisa ngalo. Umzekelo, ngekhe sisebenzise isicwangciso-qhinga esinye ukuba sithengisa ngeetshathi zemizuzu emihlanu sikhangela 'entlonzeni' njengoko besinokwenza urhwebo losuku, okanye ukurhweba ngokujikeleza. Kodwa ukuthengisa ngemini, mhlawumbi ukurhweba ngeetshathi zeyure enye, okanye ukurhweba ngokurhweba imigaqo iyafana ngokufanayo. Siza kujonga iindawo zokujika njengoko kungqinwa sisenzo sexabiso esibonisa ukuphakama kwamvanje kokuphakama kwamva nje kwaye sibeke iindawo zethu zokumisa ngokufanelekileyo.
Ukuba sifutshane kwindlela yokurhweba, siza kubeka indawo yethu yokuma kufutshane neyona ndawo iphambili yokuhlawula ingqalelo kumanani ajikelezayo. Umzekelo, ukuba besithathe urhwebo olude lwe-swing nge-8 ka-Epreli nge-EUR / USD ngebabeka indawo yethu yokuma okanye kufutshane ne-13680, eyona isezantsi. Ukungena kwethu okude bekuya kuchukunyiswa, ngokwesicwangciso-nkqubo sisonke esikucebisayo ukuba imeko yethu isengumhlobo wenqaku lakho leveki, kwi-approx. 13750, ke ngoko umngcipheko wethu uya kuba ziipips ezingama-70. Ngokwendalo siya kuthi emva koko sisebenzise ubungakanani besikhundla ekubaleni ukuqinisekisa ukuba umngcipheko kolu rhwebo yi-1% kuphela. Ukuba sinobungakanani beakhawunti eyi- $ 7,000 umngcipheko wethu ubuya kuba yi-1% okanye i-70 yeedola malunga nomngcipheko we-1 pip ngedola. Makhe sijonge kurhwebo lwasemini sisebenzisa ukhuseleko olufanayo kutshanje.
Ukujonga kwitshathi yeeyure ezine ukukhetha kwethu bekuya kuba kukufutshane kwintengiso ngokusekwe kwintengo yexabiso ephuhliswe ukusukela izolo. Sichonge i-approx yamva nje. I-13900 ayisiyiyo ngqo indawo esiya kuthi simise kuyo sinikwe inkxalabo yethu malunga namanani ajikelezayo. Ke ngoko singanqwenela ukubeka indawo yethu yokumisa ngaphezulu okanye ngezantsi kancinane kweli nani lijikelezileyo. Ngokwendlela yethu ngeba sifutshane kwi-13860 ke ngoko umngcipheko wethu uza kuba ziipips ezingama-40 +. Kwakhona sisebenzisa ubungakanani bekhaltyhuleyitha ekumiseleni umngcipheko wemali ngokusekwe kwipesenti yomngcipheko esigqibe kwisicwangciso sethu sokurhweba. Ukuba besineakhawunti eyi- $ 8,000 besingabeka umngcipheko kwi-1% okanye kwi-80 yeedola ke ngoko umngcipheko wethu ungangama- $ 2 ngombhobho ngamnye ngokusekwe kwilahleko yokumiswa kwemibhobho engamashumi amane. Ngokwenene oku kulula ukubeka indawo yethu yokumisa kunye nokubala umngcipheko kurhwebo ngalunye. Kodwa kuthekani ukuba sithatha isigqibo sokwenza ulusu, ngaba sinokusebenzisa iindlela ezifanayo? Ngokunokwenzeka hayi njengoko isiya isiba nzima ngakumbi, sivumele ukuba sichaze ..
Ukuba siya scalping, nto leyo ngokorhwebo lokuthengisa, kuthetha ukuthatha urhwebo kumaxesha asezantsi, anje ngemizuzu emi-3-5 yamaxesha, emva koko kuya kufuneka sisebenzise ubuchwephesha obahlukileyo ngokunyanisekileyo asinalo ixesha kunye nokunethezeka kokukwazi ukubala izithuba zamva nje okanye ukuphakama. Kwaye xa sinokuthi sizifumane sithengisa 'phakathi kwemigca' yamanqanaba impikiswano inokubekwa ngaphambili ukuba ukuzama ukukhetha ukuphakama kunye nokuhla ngaphakathi kuluhlu akunantsingiselo.
Ke ngoko kuya kufuneka sisebenzise isicwangciso esiliqili esahlukileyo ukubala iindawo zethu zokumisa, ngokusekwe ngakumbi kumngcipheko ngokuchasene nokubuyela okunokubakho. Ke ngoko sinokukhetha ukwamkela oko besikade sikubiza ngaphambili kwiikholamu zethu iqhinga 'lomlilo kwaye ulibale'. Ukuba siyalwamkela iqhinga elinjalo siya kungena kurhwebo lwethu sikhangela umngcipheko we-1: 1 ngokuchasene nokubuyela. Siza kuthi mhlawumbi sisebenzise isitayile sokugcina umkhondo ukunciphisa ilahleko ubuncinci kodwa sijonge ukubuya kwemipu eyi-10-15 (thabatha ukusasazeka kunye nekhomishini) kunye nenqanaba elifanayo lomngcipheko wepips. Kodwa nokuba liyintoni na ixesha elimisiweyo liyimfuneko kwaye ngaphandle kwamathandabuzo baya begxeka ngakumbi kumaxesha asezantsi esisebenza kuwo.
« Izabelo ze-Yahoo zonyuka nge-8% kurhwebo lwasemva kwexesha ukunceda ukuphucula uluvo kwiimarike zase-USA Iibhola zaseYurophu ziqala ukubuyisa ilahleko yayizolo njengoko i-Nikkei inyuka ngaphezulu kwe-3% ngobusuku bonke »
Phakathi kwemigca (327)
Umguquleli weMali (21)
Ukurhweba ngeMali (10)
Windows RT (99)
Izihloko ezifakiwe (11)
Iakhawunti ye-Forex (83)
Isibali-mali se Forex (66)
I-Forex Calender (13)
Iitshati forex (36)
Izikhombisi ze Forex (45)
Amatye axabisekileyo e-Forex (45)
Signals Forex (37)
Isoftware ye-Forex kunye neNkqubo (46)
Amanqaku orhwebo nge Forex (1,117)
Uqeqesho lweNtengiso ye Forex (40)
Analysis Fundamental (1)
Iindaba eziShushu zokuThengisa (17)
Ngaba iTrendle isenguMhlobo wakho (67)
Uhlalutyo Market (1)
Uhlalutyo Market (214)
Amagqabantshintshi eMarike (571)
Iingxelo zeMarike (82)
Isithuba sengqondo (225)
Ukufowuna kwasekuseni (677)
Iindlela eziDlulileyo (1)
Uhlalutyo Technical (4)
Iindaba Eziphezulu (23)
Ukuchaza uNyango kunye neNkxaso ngePivot Points Calculator kaThomas DeMark
Njani uHeikin Ashi, iZibane eziDwelisiweyo, ezinokukunceda ukuba uphephe ingxolo kwiMarike ye-Forex
Intshukumo yamaxabiso kwiitshathi 'ze' usebenzisa amakhandlela kaHeikin Ashi, indlela elula ngayo enokuthi ixilonge ubunzima
Eyona mithetho mikhulu kaNassim Taleb yengcebiso yokuthengisa ubhontsi
I-39% yabarhwebi be-Forex banenzuzo
Urhweba njani ngesalathisi seZig Zag?
Kutheni ukurhweba ngokujingi kunokukusebenzela?
Ngaba unokuba ngumthengisi ophumeleleyo we-forex?
Yintoni i-OsMA, kwaye isetyenziswa njani?
Yintoni eyenza imarike ye-Forex ibambe?
hlobo: Umxholo wale nto unxibelelwano lokuthengisa, kwaye hayi ingcebiso ezizimeleyo zotyalo-mali okanye uphando.
Imathiriyeli yenzelwe ulwazi ngokubanzi kuphela (nokuba ayichazi na izimvo). Akukho nto kwezi zinto (okanye kufuneka ithathelwe ingqalelo njengezomthetho, yezemali, yotyalo-mali okanye enye ingcebiso apho ukuthembela kufuneka kubekwe khona. Akukho luvo lunikezelweyo kwimathiriyeli lucebisa iFX Central Clearing Ltd okanye umbhali ukuba naluphi na utyalomali, ukhuseleko, intengiselwano okanye isicwangciso sotyalo mali silungele nawuphi na umntu.
Nangona ulwazi olumiselweyo kunxibelelwano lwentengiso lufunyanwa kwimithombo ekukholeleka ukuba inokuthenjwa, iFX Central Clearing Ltd ayenzi siqinisekiso ngokuchaneka okanye ukugqibelela kwayo. Lonke ulwazi luyabonisa kwaye luya kutshintsha ngaphandle kwesaziso kwaye lungaphelelwa lixesha nangaliphi na ixesha. Nokuba iFX Central Clearing Ltd okanye umbhali wale nto iya kuba luxanduva lwayo nayiphi na ilahleko onokuthi uyenze, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, evela kulo naluphi na utyalomali olusekwe kulo naluphi na ulwazi oluqulethwe apha. Funa iingcebiso ezizimeleyo ukuba ziyafuneka
© 2022 Ibhlog yokuRhweba ngeMali ePhambili- Iindaba ze-Forex, amaNqaku kunye noHlolo lweNtengiso- iFXCC | Umrhwebi kwicala lakho
zeSITA Wordpress. Eyilwe ngu IVergo ™